एक खुट्टाको भरमा नाच देखाएर चर्चा बटुलेकी रोमा न्यौपानेलाई पक्राउ…. – पुरा पढ्नुहोस्……
एक खुट्टाको भरमा नाच देखाएर चर्चा बटुलेकी रोमा न्यौपानेलाई पक्राउ….
काठमाडौं,१७ फागुन । गत शनिबार जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरभित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम भइरहेको थियो । बाहिर घुमुवा टोलीका तीन प्रहरी कसैलाई पक्रने सुरसारमा कुरिरहेका थिए । कार्यक्रम सकिएपछि प्रहरी टोलीले एक खुट्टाको भरमा नाच देखाएर चर्चा बटुलेकी रोमा न्यौपानेलाई पक्राउ गर्‍यो ।
रोमालाई सुरुमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्ग पुर्‍याइयो । त्यहाँबाट महानगरीय प्रहरी वृत्त, लैनचौर लगियो । लैनचौर वृत्तले दरबारमार्ग वृत्तमै फिर्ता पठायो । सोही साँझ दरबारमार्ग वृत्तले रोमालाई छाडिदियो ।आखिर कसैले भनेकै भरमा रोमालाई दिनभर कुरेर प्रहरीले किन पक्राउ गर्‍यो ? अनि उनलाई दिनभर यताउता डुलाएर साँझ त्यत्तिकै किन छाडियो ?
रोमाले आफूलाई किर्ते कागज, छाप र चलानीका आधारमा फसाउन खोजिएको दाबी गरिन् । उनले शनिबार आफूलाई प्रहरीले बिनाकारण पक्राउ गरेको बताउँदै भनिन्, ‘म साक्षी बसेकै कारण मलाई फसाउन खोजियो । दु:ख दिने काम भयो ।’ रोमाले आफ्नाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा रहेको आफूलाई थाहा नभएको र अदालतबाट कुनै त्यस्तो पत्र नआएको बताइन् ।
को हुन् रोमा ?
२०७२ सालमा नेपाल सरकारबाट युवा प्रतिभा तथा युवा उद्यमी अवार्ड पाएकी रोमा नृत्य र अभिनयका क्षेत्रमा ख्याती कमाएकी कलाकार हुन् ।
८ वर्षको उमेरमा बस दुर्घटनामा देब्रे खुट्टा गुमाएकी उनी एउटा खुट्टाकै भरमा कुशल नृत्य गर्न सक्ने भनी चर्चित भइन् । टेलिफिल्म र म्युजिक भिडियोमा समेत आफ्नो प्रतिभा देखाएकी उनले पछिल्ला वर्षमा देश(विदेशमा हुने स्टेज सोहरूमा नृत्य प्रस्तुत गर्ने गरेकी छन् ।
Prevप्रियंका देखी संचिता सम्मको होली मस्ती, कलाकारहरुले यसरी मनाउदै होली…(हेर्नुहोस् भिडियो)
Nextसिरियामा अमेरीकी सैनीक माथी रसियाले गर्यो अहीले सम्मकै ठुलो कारबाही…
एक नम्वर ट्रेन्डिङमा दया र केकीको फिल्म ‘घामपानी’ (भिडियो सहित हेर्नुहोस)
काठमाडौमै भयो यस्तो अचम्मित पार्ने बिबाह ! ढकालको छोराले कामिनी बाजा बजाएर भित्र्याए
अन्तिममा ओली बन्नेनै भए प्रधानमन्त्री! बाहिरियो सबै अन्तिम निर्णय,को के बन्ने ? पढ्नुहोस –